सरकारको निर्णयमा सेलिब्रेटीको विचार | filmyinfo.com
‘अब कोरोना संक्रमितले उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने’ भन्ने सरकारको निर्णय बारे तपाईको धारणा के छ ?
बिरामी धेरै बढेपछि सरकार तर्सियो । जबकी बढेपछि नियन्त्रणका लागि झन साधन श्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा उपचार गर्दिनँ भन्दियो । हुन त पहिला गरेको पनि के नै थियो र ?
सुरेश पौडेल, निर्देशक, एपिवान एचडी तथा निर्देशक, नेपाल आइडल
मेरो विचारमा यो राम्रो कुरा होइन, किनकि धनीमानी मान्छेहरुले त आफुसँग पैसा हुँदा गर्न सक्छन् तर सर्वसाधारण जनता, जसको घरमा खानको लागि गाह्रो परेको बेलामा यो कोरोना लाग्यो भने उहाँहरुले कसरी उपचार गर्न सक्नुहुन्छ होला ? यो कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । धेरै जसो नेपाली जनतालाई कोरोनको उपचार गर्न गाह्रो छ, सरकारले त्यस्ता उपचारमा खर्च गर्न नसक्ने नागरिकको लागि फ्रीमा उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सरकारले सबै गर्ने भन्ने संसारमा कहिंपनि सम्भव छैन । विकशित देशमा पनि बीमाबाट उपचार हुने हो, हामी पनि बीमामा जोडिनुपर्ने हो तर सरकारका बीमा कार्यक्रममा हामी नै सहभागी भएनौं । हुनेले आफ्नो उपचार आफै गरेर नहुनेको उपचारमा सरकारलाई सघाउने हो । महामारी सामुहिक प्रयासबाट मात्र जितिन्छ, सरकार, नीजि क्षेत्र, जनता सबैको सामुहिक प्रयासबाट मात्र यो विपदसँग जुध्न सकिन्छ ।
समा थापा, पत्रकार
सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो लागि के गरेको छ र ? यो कुरामा मलाई खासै त्यस्तो ठूलो कुरा केही पनि लागेको छैन, आफै सुरक्षित हुनु भन्न खोज्या होला सरकारले, अहिलेसम्म हामी आफै सुरक्षित छौं, सरकारको कारणले होइन, आशै नभएको सरकारसँग के अपेक्षा गर्नु ?
सरकार किन चहियो? TAX किन तिर्नु ?
लक्ष्मण पौड्याल, निर्देशक, डान्सिङ विथ दि स्टार
कोभिडको कारणले सबैको आम्दानीमा असर परेको छ । त्यसैले यो कुरा नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
एउटा भनाइ छ ‘गर्नु तर अति नगर्नु ।’ लामोे समय लकडाउन गर्यो, बिजनेसहरु डाउन भयो, आर्थिक स्रोत निकै कमजोर छ । झन् दैनिक मजदुरी गरेर कमाउनेहरुको अवस्था एकदमै नराम्रो छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नु पर्ने ? स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने हो आफ्नो नागरिकहरुका लागि । यस्तो महामारीको बेलामा त बरु अरु क्षेत्रको बजेट घटाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउनु पर्ने कुरा त उहाँहरुलाई ज्ञान हुनुपर्ने हो । कसैले सम्झाउनु पर्ने कुरा होइन । आफ्नो नागरिकहरुलाई समस्या परेको बेला सहयोग नगरी उल्टै झन् सास्ती गर्नु त भएन नि । यो कुरा सचेत गराउन जरुरी छ सबैलाई ।
शक्ति श्रेष्ठ, नायक
हिजो पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यापार नै गरेको हो सरकारले र आज पनि त्यसैको निरन्तरता हो । व्यापार गर्दैछ सरकार, जनताको सेवा होइन । व्यापारीको लागि सबै कुरा पाच्य हुन्छ ।
निशान कश्यप घिमिरे, सम्पादक तथा निर्देशक
सहयोग/बजेट सकिन लाग्यो, अब भन्ने त्यही हो । यो कुराले अब सरकारभन्दा व्यक्ति धनी छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
खड्ग बहादुर पुन मगर (खबपु), कलाकार
कति सरकारले मात्र हेर्ने त ? जहिले पनि सरकारको मात्र भर परेर हुन्न । सरकारको मात्र मुख ताकेर हुँदैन नि त । तर, सरकारले अब के हेर्नुपर्यो भने, सक्षम र असक्षम छुट्याउन सक्नुपर्यो । संक्रमितको परिवारको अवस्था कस्तो छ, त्यो अनुसार सरकारले खर्च गर्नुपर्यो । पारिवारिक स्थिति हेरेर सरकारले खर्च गर्दा राम्रो होला । सक्नेलाई होइन, नसक्नेलाई प्राथमिकता दिएमा उचित हुन्छ ।
किरण भुजेल, गायक
नागरिकको जीउ धनको रक्षा गर्ने सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसमाथि महामारीका बेला नागरिकको सबै प्रकारको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हुन आउँछ । तर, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने सर्वसाधारण (तोकिएका बाहेक)को उपचार नगर्ने भनेर राज्य आफ्नो प्राथमिक दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको छ । सरकारको यो रबैयाबाट नागरिकले राज्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना संक्रमित सर्वसाधारणको परीक्षण र उपचार खर्च नव्यहोर्ने सरकारको निर्णय अत्यन्तै दुःखद र खेदजनक छ ।
प्रशान्त ओझा, पत्रकार
पुष्प खड्का र गरिमा शर्मा फिचर्ड ‘भुर भुर पुतली’ सार्वजनिक [भिडियो ]